Ring Up Tech - Creating an Apple ID
Apple ID ဖွင့်နည်း
Apple ID, iTunes Account, iCloud Account စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
Apple ID သည် Apple product သုံးသူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့် iPhone, iPad, Mac သုံးသူများအတွက် လုံခြုံရေးနှင့် အရေးကြီးဒေတာ သိမ်းဆည်းမှုများအတွက် လိုအပ်သည်။
ID ဖွင့်ရန် Gmail or Email တစ်ခုလိုအပ်သည်။ Gmail ဖွင့်ရန် Google Website မှ သွားရောက်ဖွင့်နိုင်သည်။
Gmail ရလာပြီဆိုလျှင် အောက်ပါလင့်ကိုနှိပ်၍ သွားပါ။
First Name နှင့် Last Name တွင် မိမိနာမည်အား အဆင်ပြေသလို ရေးသွင်းပါ။\_
Country/Region တွင် United States ရွေးပေးပါ
မွေးနေ့ထည့်ပါ mm/dd/yyyy ဖြစ်၍ လ/နေ့/နှစ် ပုံစံဖြင့် ရေးသွင်းပါ။
name@example.com ဆိုသည့်နေရာတွင် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် Gmail လိပ်စာ ရေးသွင်းပါ။
Password တွင် နံပါတ်တစ်လုံး၊ စာလုံးအကြီးတစ်လုံးနှင့် စာလုံးအသေးတစ်လုံး အနိမ့်ဆုံးပါဝင်ရမည်။ စုစုပေါင်း Password အလုံးရေသည် ရှစ်လုံးနှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။
Security Question (လုံခြုံရေးမေးခွန်း) သုံးခုကို ကိုယ်လိုရာ မေးခွန်းရွေး၍ မိမိကြို့က်နှစ်သက်ရာ အဖြေရေးပေးပါ။ သတိပြုရန်- မည်သည့်အချိန်မေးမေး မိမိမှ ထိုအဖြေကိုသာ ဖြေဖြစ်မည့် မေးခွန်းနှင့် အဖြေများ သာရေးပါ။ ရောက်တက်ရာရာ မရေးသင့်ပါ။
Type the characters in the image ဆိုသည့်နေရာတွင် သူ့အပေါ်ပုံသေးသေးလေးထဲမှ စာသာများအားပြန်ရိုက်ထည့်ပါ။ မဖတ်တတ်လျှင် New Code ကိုနှိပ်၍ အသစ်တောင်းနိုင်သည်။
ပြီးလျှင် Continue ကိုနှိပ်ပါ။
ထိုအခါ Verify Email ဆိုသော Page. သို့ရောက်သွားပြီး နံပါတ်ခြောက်လုံးတောင်းပါမည်။ ထိုနံပါတ်ခြောက်လုံးအား Gmail ထဲသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး ဖြည့်သွင်းလိုက်ပါက Apple ID အကောင့်ရပါပြီ။ ထိုအကောင့်သည် iCloud သာသုံးနိုင်သေးပြီး iTunes မှ App များဒေါင်းရန် နောက်တစ်ဆင့်ကျန်ပါသည်။ အောက်ပါနည်းအတိုင်းဆက်လက်ပြုလုပ်ပါ။
iPhone သို့မဟုတ် iPad ထဲမှ App Store Application ထဲသို့ဝင်ပါ >> ညာဘက်အပေါ်ဆုံးမှ လူပုံလေးကိုနှိပ်ပါ။
အထက်မှာဖွင့်ခဲ့သော Apple ID ၏ Username and Password အားရိုက်၍ Sign in ဝင်ပါ။
App Store သို့သွား၍ App တစ်ခုအား install နှိပ်ပါ။ Password. တောင်းလျှင် ရိုက်ထည့်ပေးပါ။
Agree to Terms and Conditions ဘေးမှ ခလုပ်အား On ပေးပါ။ Next ကိုနှိပ်ပါ။
Payment Method တွင် None ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်ရပါမည်။ မရွေးရသေးလျှင် None ကိုရွေးပေးပါ။
Street တွင် ယခုလိပ်စာဖြည့်ပါ။ Collage Ave
City တွင် Florida
State တွင် Florida
Zip တွင် 323061058
Phone တွင် အရှေ့သုံးလုံး အနောက်တွင် ခုနှစ်လုံး ကြိုက်တာထည့်ပါ။
Next. ကိုနှိပ်ပါ။ Apple ID Completed ဆိုသည့်စာသားပေါ်လာလျှင် အခွန်လွတ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် Apple ID တစ်ခု ရပါပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ ဖုန်း၏ Setting တွင် 2-Step Verification ဖွင့်ခိုင်းလျှင် မိမိ ပင်တိုင် အသုံးပြုသော ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဖွင့်၍ 2-Step Verification ဖွင့်ထားသင့်ပါသည်။ Verification အတွက် မိမိ၏ ဖုန်းနံပါတ် နှစ်လုံး သုံးလုံးလောက်ထည့်ထားခြင်းသည် ပို၍ သင့်တော်သည်။ ထိုသို့လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖုန်းပြောက်သွားချိန် Sim Card ပါသွား၍ ID သုံးမရခြင်းမှ ကင်းဝေးမည်ဖြစ်သည်။ Apple ID ကို မိမိမသိသော သူများအား မဖွင့်ခိုင်းပါနှင့်။ ယခုစာအား အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်၍ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်၏ နည်းပညာအသိ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ring Up Tech မှာ Apple Product များ ဝယ်ယူပါ။